डा. रोशन झा अमेरिकामा पढेर नेपालीको सेवा गर्न चाहन्थे, तर सबैलाई स्तब्ध पारेर बिदा भए ! – Halkhabar kura
१४ मंसिर २०७७, आईतवार १०:३०
डा. रोशन झा अमेरिकामा पढेर नेपालीको सेवा गर्न चाहन्थे, तर सबैलाई स्तब्ध पारेर बिदा भए !
उनको सपना थियो– डाक्टरको पढाई पुरा गर्ने। र, नेपालीको सेवा गर्ने। यही उद्देश्यले उनी संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेका थिए।
तर, बिरामीको उपचार गर्दा–गर्दै डा. रोशन झा संसारबाट भौतिक रुपमा बिदा भए। न्यूयोर्कस्थत रोचेस्टर जनरल अस्पतालमा काम गर्दा–गर्दै डा. झाको निधन भएको हो।
पारिवारिक श्रोतका अनुसार ३३ वर्षीय झाको हृदयघात भइ निधन भएको हो। ‘बिहान बिरामी जाँच गरेर आराममा हुनुहुन्थ्यो, तर दिउसो हृदयघात भएपछि उहाँको निधन भयो,’ एक आफन्तले भने।
धनुषा घर भएका डा. झाले धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमबीबीएस र एमडी गरेका थिए। काठमाडौंको अलका अस्पतालमा काम गरेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न अमेरिका पुगेका थिए।
मधेशी एशोसिएसन इन अमेरिकाका महासचिव संगीत रौनियारका अनुसार डा. झाकी श्रीमती स्वेता ठाकुर पनि अमेरिकामै छिन्। ‘डाक्टर झा कोरोना प्रकोपमा पनि निरन्तर स्वास्थ्य सेवामा खटिनु भएको थियो, तर दुर्भाग्य उहाँको निधनको खबर आयो,’ रौनियारले भने।
डा.झा सन् २०१८ देखि उक्त अस्पतालमा कार्यरत थिए। उनी श्रीमती श्वेता ठाकुरसहित अमेरिका बस्दै आएका थिए।उनीहरुको केहीबर्ष अगाडि नेपालमै विवाह भएको थियो।श्वेता पनि मेडिकलको विद्यार्थी हुन। उनी न्युयोर्कको बफेलोमा डेन्टल मेडिसिनमा अध्ययनरत छिन्।
शुक्रबार बिहान बिरामीको चेकजाँच गरेका उनलाई दिउँसो अचानक हृदयघात भएको र त्यसलगत्तै निधन भएको बताइएको छ। कोरोना महामारीमा डा. झाले फ्रन्टलाइनमा रहेर बिरामीहरुको सेवा समेत गरेका थिए।
काठमाडौंको सेन्ट जेभियर्सबाट प्लस टु गरेका उनी सन् २०१८ मा रेजिडेन्ट कोर्सका लागि अमेरिका गएका थिए। डा. झाले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमबीबीएस र एमडी गरेका थिए। उनले केही समय काठमाडौँका अल्का अस्पतालमा समेत काम गरेको बताइएको छ।
Previous कास्मिर ह’मलामा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीको मृ,त्यु
Next नेपालमा कार्यरत अमेरिकीलाई भिसा निःशुल्क गर्न अमेरिकी दबाब !